‘किन ठग्छन् दलितलाई मात्रै’ – कर्णाली 24 डट कम
‘किन ठग्छन् दलितलाई मात्रै’
Karnali 24१२ भाद्र २०७८, शनिबार ०९:५४
जाजरकोट : दलित बस्तीमा वितरण गरिएका धुवाँरहित चुलोमा अनियमितता भएको पाइएको छ। पूर्ण जातिय छुवाछुतमुक्त अभियान अन्तर्गत भेरी नगरपालिकाले वडा नम्बर ११ कटि गाँउमा दलित बस्तीमा कमसल खालका चुलो वितरण गरेर बढी बिल पेश गरी अनियमितता गरेको स्थानियको गुनासो छ।
धुवाँरहित आधुनिक फलामे चुलो वितरण गर्ने भनि सम्झौता गरिएपनि टिनको कमसल खालको चुलो वितरण गरिएको स्थानिय दलबहादुर कामीले बताए। उनले आफूले लिएको चुलो एक दिन मात्र प्रयोग गरेर थन्क्याएको बताए। टिनको चुलो भएकोले बाल्ने बित्तिकै निकै तातिने र वल्डिङ्ग गरेको ठाँउबाट टुट्ने समस्या भएपछि चुलो प्रयोग गर्न छोडेको बताए। उनले चौरजहारीमा १७ सय पर्ने चुलोलाई सुर्खेतबाट १० हजारमा ल्याएको नक्कली बिल पेश गरेर आफूहरुलाई ठगी गरेको गुनासो गरे।
नगरपालिकाले चुलो खरिद र वितरणका लागि कटिगाँउ कृषक समूहसँग सम्झौता गरी जिम्मा दिएको थियो। समूहमा नरबहादुर ऐर कामी अध्यक्ष, वीरमान वर कामी सचिव र मित्रकली वर कामी कोषाध्यक्ष छन्। तर चुलो कति रकममा खरिद गरियो भन्ने कुरा समितिका पदाधिकारी समेत अनभिज्ञ छन्। समितिका अध्यक्ष नरबहादुर आफूलाई फसाइएको बताउँछन्। ‘सस्तोमा खरिद गरेर समितिका पदाधिकारीलाई समेत गुमराहमा राखेर लाटासोझा मान्छेलाई ठग्ने कार्य भयो। मेरो पनि चित्त बुझेको छैन’ उनले भने। उनका अनुसार कोषाध्यक्षका श्रीमान अमृत वर कामीले नै एक सय ३८ चुलो खरिद गरेर ल्याएका हुन्। विश्वासका आधारमा खाली चेकमा हस्ताक्षर गरेर आफूहरुले अमृतलाई दिएको र उनैले सुर्खेतबाट चुलो किनेर ल्याएका हुन्।
अध्यक्ष नरबहादुरले नगरबाट १३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ निकासा भएकोमा सम्झौता अनुसार अनुगमन र केही चुलो खरिदका लागि दुई लाख ५० हजार रुपैया नगरपालिकालाई दिएको बताए। त्यस रकमबाट २० वटा चुलो किनेर उपलब्ध गराएको बताए। नगरले उपलब्ध गराएका चुलो राम्रो भएको तर समितिले खरिद गरेका चुलो निकै कमसल भएको उनले बताए। नगरले दिएका चुलो राम्रो भएको र अमृतले खरिद गरि ल्याएका चुलो कमसल भएपछि गाँउमा विरोध भएको अध्यक्ष नरबहादुरले स्वीकार गरे। नगरपालिकाले दिएका २० चुलो राम्रो भएपछि खोसाखोस परेको थियो। ‘जसले सक्यो उसैले लियो। पछि जानेले कमसल चुलो पाए’ एक स्थानियले भने।
तर कोषाध्यक्षका श्रीमान अमृतले विपन्न गाँउमा चुलो कार्यक्रमका लागि आफूले पहल गरेको तर खरिदमा आफ्नो संलग्नता नभएको दावी गरे। उनले भने ‘चुलो खरिद कहाँबाट भयो कसरी भयो मलाई केही जानकारी छैन।’ भेरी नगरपालिका ११ नम्बरका वडाध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद आचार्यले पनि चुलो राम्रो नआएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरिरहेको बताए।
समितिका अनुसार नगरपालिकालाई चुलो खरिद र अनुगमनका लागि दिएको दुई लाख पचास हजार कटाएर बचेको रकमबाट एक सय ३८ चुलो रारा इन्जिनीयर वर्कसप कम्पनी सुर्खेतबाट खरिद गरिएको थियो। एउटा चुलोको कम्तिमा ८ हजार बढी नै परेको देखिन्छ। जुन बजार मूल्यको भन्दा निकै बढी हो। समितका अध्यक्ष नरबहादुरले चित्त नबुझेर कम्पनीका धनबहादुर बुढालाई सम्पर्क गर्दा म के भनौ साथीहरु उतै कुरा मिलाउहोस् भनेको बताए। अन्नपुर्णपोष्टले कम्पनीसँग यस विषयमा सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन।
नगरपालिकाले पूर्ण जातिय छुवाछुतमुक्त अभियान अन्तर्गतको १४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ अन्तिममा आएको र फ्रिज गर्नुभन्दा दलित बस्तीमा चुलो वितरण गरौँ भन्ने असल मनसायले कटिगाँउमा रहेको कटिगाँउ कृषक समुहका नाममा गत असार ११ गते सम्झौता गरि रकम निकासा गरिएको निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अनिश शाहले बताए। उनले रकम समेत समूहका नाममा निकासा दिइएको र खरिदसमेत उनीहरुले नै गरेकोले यसमा नगरपालिकाको संलग्नता नरहेको बताए। गुनासो आएकोले यस सम्बन्धमा के भएको हो आवश्यक छानवीन गर्न सकिने उनले बताए।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल बीचको वार्ता सकियो
२३ असार २०७८, बुधबार २२:५१
शिक्षण अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले रोकिएको तलबभत्ता पाउने
८ श्रावण २०७८, शुक्रबार १२:२६
ई-सेवाले माग्यो देशभर २६५ कर्मचारी,कहाँ कती खाजेकाे छ पुरा पढ्नुहाेस् ।
१ बैशाख २०७८, बुधबार २२:४५
फुटेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा काे कता? नाम सहित
३ भाद्र २०७८, बिहीबार ०७:४८
प्रधानमन्त्रिले फिर्ता गरे भत्ता
१९ जेष्ठ २०७८, बुधबार ०५:०८
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हतारमा विद्यालय सञ्चालन नगर्न निर्देशन १२ भाद्र २०७८, शनिबार ०९:५४
एमसीसी बारे जनताको धारणा १२ भाद्र २०७८, शनिबार ०९:५४
८ महिने शिशुको आमाले खुट्टा समाए वुवाले…!! १२ भाद्र २०७८, शनिबार ०९:५४